Ebumnuche 5 kpatara ị ga -eji jiri uPVC Pipes maka Mmepụta Mmiri - Vinylpipe
Ebumnuche 5 kpatara ị ga -eji jiri uPVC Pipes maka Mmepụta Mmiri
Borehole, Borewell, Mwube Bridge, Ileba Ọmụmụ, Comparison, Ngwaọrụ Elektrọnik, Nrụpụta Industriallọ Ọrụ, Mmụta mekanịkal injinịa, Mmanụ na Gas, Usoro ike, Nsogbu & Ngwọta, Ihe mkpuchi uPVC, Pipe kọlụm uPVC, Mmiri Ọfụma
Mmụba nke mmiri na sistemụ nsị na-abawanye ngwa ngwa n'ihi mmebi, mwepu, na mgbaji na ngwa ọkpọka na-eme ka ikike anyị nwee inye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ dị ọcha ma dị mma yana ọrụ ịdị ọcha gburugburu ebe obibi dị ugbu a na maka ọgbọ anyị n'ọdịnihu. uPVC ọkpọkọ nwere uru dị iche iche karịa ọkpọkọ ọla ọzọ maka ọrụ mmiri ọ bụla.
Isi ihe ise mere ọkpọkọ uPVC ji bụrụ ihe kacha mma maka oru mmiri:
Nhọrọ kacha mma maka ọkpọkọ n'okpuru ibu
uPVC ọkpọkọ na-ada ụda nke ukwuu ma nwee ike na-adọtị n'emebighị ya mgbe eburu ya n'ubu site n'ịdị arọ ala na oke okporo ụzọ. Pipe ndị siri ike, dị ka ndị nke igwe na simenti enweghị ike ịgbatị mgbe ha na-ebu ibu, ọ ga-ada mgbe ọ ruru ike ibu..
Mgbe ọkpọkọ uPVC zutere ibu mpụga, dayameta ya ga -amalite ịgbari. Ọ bụrụ na a na -eli ọkpọkọ na ọnọdụ ala na -akwado, na n'ime Vinyl uPVC ọkpọkọ ọkpọkọ isi ike nke ala jikọtara ya na ọkpọ ọkpọ na kọlụm ọkpọkọ ga -eguzogide ntụgharị ihu.
UPVC ọkpọkọ ikuku dị larịị na-ebelata nguzogide mmiri na ya mere na-ebelata ọnụ ahịa mgbapụta, yana nkwonkwo ya na-enweghị mmiri site n'enyemaka nke LPR (Leak Proof Links) na-ewepụ mfu mmiri n'ihi mgbapụta na nguzogide nke nwere ike iru pasent 45 n'ime ụfọdụ netwọk ọkpọ ọkpọ oge gara aga.
Mmiri kacha mma
Metal ọkpọkọ n'ihi corrosion na n'ihi elu na -emeghachi omume na kemịkal dị n'ime ala na -emepụta mmiri dị ala. Ị nweghị ike ị drinkụ ya na -enweghị nzacha kwesịrị ekwesị. N'ebe dị anya na paịpụ sitere na ihe ọdịnala, mgbidi na -adịghị ahụkebe nke ọkpọkọ uPVC na -eme ka o siere ndị ala ike ịgbakọta.
uPVC na -eguzogide asịd, alkalis, na nnu inorganic. Maka ọrụ inye mmiri nkịtị, uPVC anwụrụ anaghị emetụta ala na mmiri mmiri. UPVC ọkpọkọ enweghị ike ịdaba na mbibi mpụga nke olulu mmiri n'ihi ihe ndị dị na ala yana corrosion kọlụm dị n'ime.
In uPVC SWR ọkpọkọ microorganisms dị ka nje na nje ndị ọzọ dị ka algae enweghị ike ịrapara na mgbidi n'ime ọkpọkọ nke bụ nnukwu uru maka sistemụ ọkpọ mmiri, nke na -adịkarị mkpa ibufe mmiri mkpofu nke nwere oke nsị.
uPVC ọkpọkọ n'ihi ịdị larịị dị larịị na -enye ohere ka mmiri na -asọpụta n'efu ma bulie nrụgide mmiri. Mmụba nke ọkpọkọ uPVC SWR na -egbochikwa mwepu nke mgbochi na sistemụ mmiri mmiri.
N'ime uPVC ogologo oge, ọkpọkọ na-echekwa ọnụ ahịa ma e jiri ya tụnyere paịpụ igwe. Ọbụna karịa mgbe a na -echebara nrụnye dị mfe, ọnụego mgbaji ala, na ọnụ ahịa okirikiri ogologo ndụ.
Ogologo ndụ ọkpọkọ uPVC pụtakwara ịrụ ọrụ nke ọkpọkọ ahụ, mmezi ya dị ala, yana ọrụ na -aga n'ihu na ọkpọkọ na -eme ka ọ dị ọnụ ala karịa oge.
E gosipụtara ogologo ndụ na ọrụ
uPVC Ọkụ nwere ndekọ arụmọrụ egosipụtara na mba ụfọdụ site na afọ 48 gara aga, ebe ọmụmụ mba ofesi na -egosi afọ ndụ nke ọkpọkọ PVC gafere afọ 110.
Dịka ọmụmaatụ, E wuru atụmatụ inye mmiri Millewa n'oge mbido 1970 iji nye mmiri echekwara na mpaghara ugbo na obodo mepere emepe na North-Western Victoria na Australia.
Ihe dị ka mita 60000 nke ọkpọkọ PVC arụnyere. Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 40 nke ọrụ, ọkpọkọ PVC na -aga n'ihu na -arụ ọrụ nke ọma n'okpuru ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
Uru nke uPVC karịa PVC na ọkpọkọ ọla - Vinyl Pipes
Ọ bara uru igwu mmiri nke ọma?- Ọkpụkpọ Vinyl
Ihe ịma aka mmiri nke Russia- Lelee nke ọma
7 atụmatụ uPVC dị elu kọlụm mara mma - Ọkpụkpọ Vinyl
Onye na -eweta mgbapụta na Pipes ga -agụrịrị - Vinyl Pipes
Nsogbu & Ngwọta
Ihe mkpuchi uPVC
Pipe kọlụm uPVC
Mmụta sịvịl injinịa Mmanụ & Gas
Debanye aha ka ị nweta posts ọhụrụ n'aka anyị